Culimo soo jeedisay in la hakiyo salaadda Jimcaha ee Xalab - BBC News Somali
Culimo soo jeedisay in la hakiyo salaadda Jimcaha ee Xalab
Image caption Magaalada Xalab waxaa ka jira burbur xoogan iyada oo ay magaaladu u kala qaybsan tahay dowladda iyo xoogagga mucaaradka.
Gole diimeed ka dhisan magaalada Xalab ee dalka Suuriya ayaa markii ugu horreysay soo jeediyay in la hakiyo salaadda Jimcaha.
Golahani ayaa sheegay in arrintaasi ay u soo jeediyeen maadaama colaadda ka socota halkaasi ay halis ku tahay nolasha dadka masaajidda isgu imaanaya ee doonaya in ay tukaadaan salaadda Jimcaha.
In kabadan 200 oo qof ayaa lagu dilay duqeymo dhanka cirka ah oo muddo toddobaad ah ay wadday dowladda Suuriya iyo fallaagada oo hoobiyeyaal ku garaacayay magaaladaasi kala qaybsan.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon, oo wareysi siiyay BBC-da ayaa ugu baaqay mas’uuliyiinta Suuriya in ay ka gudbaan in ay eegtaan danahooda oo kaliya ayna ku baaqaan in la joojiyo burburinta dalka.
Hindisaha gole diimeedkani ayaa ku soo beegmaya xilli Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in xaaladda magaaladaasi ay tahay mid aad u xun, kaddib markii tobaneeyo qof lagu dilay weerraro lagu bartilmaameedsaday isbitaal halkaasi ku yaal.